ကိုဗစ်ကာလ အညာသားကိုယ်တိုင် ချက်စားဖြစ်သမျှဟင်းတွေထဲက မှတ်တမ်းတင်ထားမိတဲ့ ဟင်းခွက်လေးတွေပါ...။
ဒီဟင်းခွက်တွေကတော့ ကိုဗစ်ကာလမှာ စတေးအက်အဆောင် မဟုတ်ဘဲ ပုံမှန်ကျောင်းသွား အလုပ်လုပ်ပြီး
ကျောင်းထဲကညနေခင်းဈေးမှာ ကိုဗစ်စည်းကမ်းနဲ့အညီစျေးဝယ်ပြီးချက်စားဖြစ်တဲ့ ဟင်းလေးတွေပါ။
လာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့အတွက် အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ ရွှေညာသားကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်။ ကိုဗစ်ရောဂါဘေးမှလည်းကင်းဝေးကြပါစေ။
၁၃၈၂ ခုနှစ် ပြာသိုလ် လဆန်း (၁၁) ရက်
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၃) ရက်
စာရေးသူ ရွှေညာသား at Saturday, January 23, 20210comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
အခုရက်ပိုင်း မိုးမရွာတဲ့ညနေခင်းတွေမှာ ကျောင်းထဲကကန်ကိုပတ်ပြီးလမ်းလျှောက်ဖြစ်တယ်။ ညနေ ၇ နာရီလောက်အထိ ပြေးသူ လမ်းလျှောက်သူတွေများတာကြောင့် ကျောင်းက ၇ နာရီလောက်မှပြန်ပြီးလူနည်းတဲ့အချိန်မှကန်ကို သုံးပတ်ရောက်အောင်လမ်းလျှောက်တယ်။ ကျနော်ကခြေလှမ်းမြန်သူမို့ တပတ်ကို ၁၃ မိနစ်ပဲကြာတယ်။ ပြေးမယ်ဆိုရင်တော့ အချိန်တိုတာပေါ့ ဒါပေမဲ့ နှလုံးက သိပ်ပြီး အမောခံလို့မရတာကြောင့် ဖြေးဖြေးမှန်မှန်ပဲလမ်းလျှောက်ဖြစ်တယ်။ ထိန်းသိမ်းမှု့ကောင်းတော့ကန်ရေပြင်က အမြဲတမ်းကြည်လင်နေပြီး ကန်ပတ်လမ်း တစ်လျှောက်မှာ သစ်ပင်တွေလည်း စုံနေအောင်စိုက်ထားတယ်။ လမ်းလျှောက်ရင်းတခါတခါ ပန်းရနံ့ရလို့သထိထားကြည့်တော့ ကန်ပတ်လမ်းအ‌ပေါ်ဘက်မှာ စကားဖြူပင်တွေတန်းစီပြီးစိုက်ထားတာ အများကြီးပဲ။ အဲ့ဒီစကားဖြူပန်းတွေပွင့်ချိန်ဆို ကန်ပတ်လမ်းတစ်လျှောက်မွှေးကြိုင်နေတာပါပဲ။ နံနက်အစောနဲ့ညနေခင်းလမ်းလျှောက်ရင်း လေကောင်းလေသန့်နဲ့အတူပန်းရနံ့ကိုပါတဝကြီးရှုရှိုက်နိုင်တယ်။
နောက်တခု ကန်ဘောင်နဲ့အနီးဆုံးမှာကတော့ဆီးဖြူပင်နဲ့တခြားအရိပ်ရသစ်ပင်တွေတန်းစီပြီးစိုက်ထားတယ်။ ဆီးဖြူသီး သီးတဲ့အချိန်ဆို အသီးတွေကအပင်အောက်ကြွေကျနေတာ ကောက်သူသိပ်မရှိဘူး။ တချို့လည်း နည်းနည်းပါးပါးကောက်ကြတယ်။ အပင်တွေကမြင့်တာမို့တက်ခူးဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူး။ လေတိုက်လို့ကြွေကျတာကိုပဲ ကောက်နိုင်တာ။ အဲ့ဒါကြောင့် ကန်ဘေး လမ်းလျှောက်ရင်း ဆီးဖြူသီးအကြွေကောက်ပြီး ဆီးဖြူသီးသနပ်လုပ်ထားတာ မျှဝေလိုက်ပါတယ်ဗျ။
သနပ်ပြုလုပ်နည်းကလည်းအလွန်လွယ်ပါတယ်။ ဆီးဖြူသီးကိုကျက်အောင်ပြုတ်ပြီးအအေးခံထားပါတယ်။ အေးသွားတဲ့အခါအစေ့ကိုဖယ်ပြီးဆားအရသာမှုန့်ထည့်ပြီးငရုတ်ဆုံနဲ့ညက်အောင်ထောင်းပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်ချက် အေးသွားတဲ့အခါ ထောင်းထားတဲ့ဆီးဖြူသီးကို ကုလားလေးမဆလာထည့် ဆီချက်နဲ့ရောမွှေပြီး ဗူးထဲကိုထည့်လေလုံအောင်ပိတ်ထားပါတယ်။ ၂ ညလောက်ထားပြီးရင် ဆီးဖြူသီးသနပ်စားလို့ရပါပြီ။ ကျနော်ကတော့ ကျောင်းကို ထမင်းချိုင့်ယူသွားတာမို့ ဟင်းတစ်ခွက်အလွယ်ရပါတယ်။
ဆီးဖြူသီးသနပ် အားလုံးပြင်ဆင်ပြီး ပုံ
ဆီးဖြူသီးသနပ်ကို ပဲဟင်းချို၊ ဘူးသီးဟင်းခါး၊ ငါး‌ပိကောင်ကြော်၊ ငါးခြောက်မီးဖုတ်တို့နဲ့တွဲပြီးစားလို့ အလွန်လိုက်ဖက်ပါတယ်။ အဖန်အရသာကထမင်းမြိန်စေပြီး ခံတွင်းလည်းလိုက်စေပါတယ်။
အားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာပြီးလိုရာဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်ခင်ဗျ။ လာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၁၃၈၂ ခုနှစ် နတ်တော်လဆန်း (၅) ရက်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၉) ရက်
စာရေးသူ ရွှေညာသား at Friday, December 18, 20200comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ကိုဗစ်ကြော့ အပြင်ကစျေးတွေကို မသွားဖြစ်တာတော်တော်ကြာသွားလို့ ပြီးခဲ့တဲ့လက ဓာတ်ခွဲခန်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းဝယ်ရာကအပြန် ကျောင်းနားက ညနေခင်းစျေးလေးကို ခဏဝင်ရင်း အသီးအနှံတချို့ဝယ်ဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်ကအသီးအရွက်မျိုးတွေ ရောင်းတတ်လို့ ကြောင်လျှာသီးလိုက်ရှာတာ အညာဂွေးသီးမှည့်တွေရောင်းနေတာတွေ့လို့ ဘတ် ၂၀ ဖိုးဝယ်ခဲ့လိုက်တယ်။ ထိုင်းတွေကတော့ သင်္ဘောသီးထောင်းထဲကိုထည့်တာပဲမြင်ဖူးတယ်။ ရွာမှာတုန်းက နွေဦးပေါက်ချိန်ဆို ဂွေးပင်တွေအောက် ဂွေးသီးမှည့်ထွက်ကောက်ရတာသတိရမိတယ်။ ကျောင်းသွားရင်းလမ်းမှာ ဂွေးသီးမှည့်ဝင်ကောက်ပြီး ကျောက်ပန်းတောင်းကနေ စာလာသင်တဲ့ဆရာမတွေကို လက်ဆောင်ပေးရတာလည်း သတိရမိတယ်။ အညာ‌ဂွေးသီးကမှည့်လာရင် အနံ့ကအရမ်းမွှေးတာ အရသာကဖန်ချိုချိုလေးနဲ့စားလို့လည်းအလွန်ကောင်း။ အညာစတိုင်ချက်ပြုတ်စားသောက်လေ့ရှိတာကတော့ ဂွေးသီးမှည့်ကို ခရမ်းချဉ်သီးကြက်သွန်ဆားငါးပိထည့်ပြီးလုံး ရေမြုပ်အောင်ထည့်ပြီးပွက်အောင်တည် ဆူလာတော့ နှမ်းလှော်ထောင်းထည့်ပြီး မီးဖိုပေါ်ကချ နှမ်းလှော်နံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ ဂွေးသီးဟင်းကို လယ်ရဆန်ထမင်းပူပူနဲ့စားရတာလည်း အရသာတစ်မျိုးကောင်းတယ်။ အဖွားရှိတုန်းကတော့ လဘက်ရည်အမြည်းသုပ်တဲ့ ခြုပ်ကလေးထဲကိုဂွေးသီးမှည့်လေးတွေလှီးထည့် ငါးပိမီးဖုတ်နဲ့နယ် နှမ်းဆီရွှဲနေအောင်ဆမ်းပြီး နှပ်ထားတတ်တာ။ ညနေနွားကျောင်းပြန်အဆာပြေထမင်းကြမ်းနဲ့‌ဂွေးသီးငါးပိဖုတ်ဆီဆမ်းနဲ့စားရတာလည်းလွန်ကောင်းပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ ဂွေးသီးမှည့်ကို ပါးပါးလှီး ကုလားအော်ငရုတ်သီးစိမ်း ကြက်သွန်ဖြူ ငါးပိမီးဖုတ်ထည့် တို့နဲ့ရောထောင်းပြီး ဟင်းချိုဟင်းနဲ့တွဲစားရတာလည်းအလွန်ထမင်းမြိန်တယ်။
အညာဂွေးသီးမှည့်ကို ငါးပိအိုးကပ် ငရုတ်သီးစိမ်း ကြက်သွန်ဖြူတို့နဲ့ ရောထောင်းထားတာပါ
ဒါကတော့ ဂွေးသီးထောင်းနဲ့တွဲစားဖို့ ပဲဝါလေးကိုကြာဇံနဲ့သခွားသီးရောပြီး ဟင်းချိုချက်ထားတာပါ
အဲ့ဒီနေ့က ထမင်းပွဲကတော့ ဗိုက်ပြည့်လိုသာရပ်ထားရတယ် တော်ကိုမတော်ချင်ပါဘူး။ အသားဟင်းတွေမစားချင်တဲ့အခါ အခုလိုမျိုးဟင်းစပ်လေးတွေကလည်း ထမင်းမြိန်စေပါတယ်။ အားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာပြီး ကပ်ရောဂါဘေးမှကင်းဝေးကြပါစေဗျာ။ လာရောက်လည်ပတ်တဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်လည်းရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့အညာဟင်းလေးတွေ ဆက်လက်ပြီးတင်ပေးပါအုံးမယ်။
၁၃၈၂ ခုနှစ် တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း (၁၂) ရက်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ (၂၆) ရက်
စာရေးသူ ရွှေညာသား at Thursday, November 26, 20200comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
အညာသားတို့ဆီမှာ သီတင်းကျွတ်လရောက်ပြီဆိုရင် ရွှေဖရုံသီးတွေပေါပါတယ်။အညာရွှေဖရုံသီးကစေးစေးလေးနဲ့စားလို့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။အညာမှာရွှေဖရုံသီးကို ဟင်းချိုချက်စားတယ်၊ မုန့်နှစ်နဲ့ကြော်စားတယ်။ ကောက်ညှင်းနဲ့ထမနှဲထိုးစားတယ်။အခြမ်းလိုက်ပြုတ်ပြီးဆီနဲ့ဆားရောဖျော်ပြီးတို့စားတယ်။ အမှည့်ကို ပါးပါးလှီး နေလှန်းပြီး ထန်းပိုဦးထန်းလျက်နဲ့ ဖရုံယိုထိုးစားကြတယ်။ သီတင်းကျွတ်ဘုရားပွဲဆိုရင်တော့ ရွာဦးကျောင်းမှာရွှေဖရုံသီးကိုဝက်သားနဲ့‌ရောချက်ပြီး ဘုရားပွဲလာသမျှလူတိုင်းကို ထမင်းကျွေးပါတယ်။ နေ့လယ်နေ့ခင်းမှာ အဖွားလုပ်ကျွေးတဲ့ ဖရုံသီး ကောက်ညှင်းထမနှဲက နွားကျောင်းပြန်လာတဲ့ ကျနော်တို့ မြေတစ်စုအတွက် အလွန်ကောင်းတဲ့ အဆာပြေအစားအစာပါပဲ။ အခုတော့လည်း အဲ့ဒီအစားအစာတွေနဲ့ဝေးနေတာကြာပါပြီ။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းမြန်မာနဲ့နီးတော့အစားအစာအသီးအနှံတော်တော်များများကမြန်မာနဲ့တူလို့အညာသားအတွက် အဆင်ပြေလှပါတယ်။တလောက အညာဂွေးသီးမှည့်တွေ့လို့ ဝယ်စားသေးတယ်။ ဆီးဖြူသီးလည်းဝယ်လို့ရတယ်။ ချက်ပြုတ်စားဖြစ်တဲ့ဟင်းလေးတွေအကြောင်းအများဆုံးပြောဖြစ်တာကတော့ အိမ်ကအမေနဲ့ပါပဲ။ အဝေးမှာနေတဲ့သားအတွက် အမြဲတမ်းစိတ်ပူနေတတ်လို့ နှစ်သိမ့်ရင်း အဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြရတာပေါ့။ အစားအစားတွေဘယ်လိုပေါကြောင်း အသီးအနှံတွေကမြန်မာပြည်မှာလိုဝယ်လိုရကြောင်းတွေပြောရင် ဝမ်းတွေသာလို့။ တခါတလေ ဒီဘက်နေ ဗွီဒီယိုခေါ်ပြီး ထမင်းစားရင်းစကားပြောပေါ့။အဓိကကကိုယ့်ကိုမြင်တဲ့အခါ အမေ့မျက်နှာပြုံးနေဖို့ပဲလေ။ အခုလည်း အမေနဲ့ပြောတုန်းက ပြောဖြစ်တဲ့ဟင်းခွက်လေးတွေကို အားလုံးအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ချက်ပြုတ်နည်းကတော့သိပ်ပြီးမခက်ခဲတာကြောင့် သပ်သပ်မရေးတော့ပါဘူး။
ဒီဟင်းကတော့ အညာဖရုံသီးကိုပဲသီးနဲ့ရောပြီးပင်စိမ်းရွက်လေးအုပ်ပြီးချက်ထားတာပါ။ ရုံပတီးသီးနဲ့ မျှစ်ဆတ်ထည့်ချက်ရင်လည်းရပါတယ်။ ဒီဟင်းကို မန်ကျည်းသီးထောင်း ငါး‌ခြောက်ဖုတ်သို့မဟုတ်ငါးပိကောင်ကြော်တို့နဲ့တွဲဖက်စားလို့အလွန်လိုက်ဖက်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ရွှေဖရုံသီးဟင်းနဲ့တွဲဖက်စားဖို့ ဆိုင်ကဝယ်တဲ့ငါး‌ပိကောင်ကြော်ကို ငရုတ်သီးကြက်သွန်တို့နဲ့ရောပြီး ပြန်ကြော်ထားတာပါ။ စားလို့အလွန်ကောင်းပါတယ်။
ကျနော်ကမျက်မှန်သမားမို့ ရွှေဖရုံသီးက မျက်စေ့နဲ့တည့်တယ်ဆိုတာ ဖတ်ရလို့ မကြာခဏ ဝယ်ပြီးချက်စားဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းကလူတွေကတော့အသီးအရွက်ပဲစားလို့ ကျန်းမာတာဆိုပြီးပြောကြတယ်။ ကိုယ်စားတဲ့အစားအစာအများစုကလည်း တခါတလေ ငါးနဲ့ကြက်ဥကလွဲရင် ကျန်တဲ့အချိန်က အသီးအရွက်ဟင်းတွေပဲများပါတယ်။ နောက်လည်းအညာဟင်းလေးတွေ တင်ပေးပါအုံးမယ်ဗျာ။ လာလည်ကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာပြီး ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဘေးမှ ကင်းဝေးကြပါစေလို့ ရွှေညာသားက ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်။
၁၃၈၂ ခုနှစ် တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း (၅) ရက်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ (၁၉) ရက်
စာရေးသူ ရွှေညာသား at Thursday, November 19, 20200comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ.....ဘလော့ထဲမရောက်တာလည်း တော်တော်လေးကြာသွားပြီ။ ကိုဗစ်ကြီးမွှေနေတုန်း အစားအသောက်တွေလည်း တတ်သမျှအကုန် တမျိုးပြီးတစ်မျိုး မရိုးရအောင်ချက်စားနေဖြစ်တော့တာပဲ။ အခုမုန့်ဟင်းခါးလည်း ကိုဗစ်နည်းနည်းစဲသွားတော့ ကျောင်းထဲကစျေးမှာ မုန့်ဖတ်ဝယ်ပြီး အဆောင်အောက်က ငှက်ပျောတောက ငှက်ပျောပင် အနုကိုခုတ်ပြီး ပဲဝါလေးကို ပဲမှုန့် နဲ့ ငှက်ပျောအူ များများ ထည့်ပြီး မုန့်ဟင်းခါးချက်စားတုန်းကသိမ်းထားတဲ့ပုံလေးတွေပါ။ မစားရတာကြာတော့ အဲ့ဒီနေ့က တနေကုန် ထမင်းလွတ်တွယ်လိုက်တယ်။ အဆောင်မှာလည်းစား ဘေးအခန်းက မြန်မာညီလေးတွေကိုလည်း တစ်ပန်းကန်စီ ဝေစားနဲ့ ကုသိုလ်လည်းရ ဝမ်းလည်းဝပေါ့။ ကိုယ့်စေတနာကပဲ အကျိုးပေးတယ်ဆိုရမလား အစားအစာ သူများကိုပေးဝေစားတော့ ကိုယ့်ကိုလည်း ကျွေးမည့်သူကမရှားဘူး။ ဌာနမှာဆို အမြဲတမ်းလိုလိုစားရတာ။
ပဲဝါလေး နဲ့ ပဲမှုန့် ငှက်ပျောအူ မုန့်ဟင်းခါး
ဒီပုံက ဌာနမှာ နေ့လယ်စာ မစားခင်မှတ်တမ်းပြုထားတာ
ဘူတန်က မာစတာတက်တဲ့ကျောင်းသူကိုလည်း မြန်မာအစားအစာမိတ်ဆက်ရင်းနဲ့သူ့ကိုပါကျွေးလိုက်တယ်
သူကသက်သတ်လွတ်သမားမို့ ဘဲဥကအလုံးလိုက်ပြုတ်ထည့်ထားတာလို့ ဟင်းရည်ကနင်စားလို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ထည့်ကျွေးတာ အညာသားလက်ရာမှာ လျှာလည်သွားဟန်တူရဲ့ ချက်နည်းမေးတော့တာပဲ။ ဟိုတစ်ခါ တို့ဟူးသုပ်လုပ်တုန်းကလည်း သူ့ကိုကျွေးတာ သတိရတိုင်း တို့ဟူးသုပ်လုပ်ခိုင်းနေလို့။ ဒီတစ်ခါဆို ငါက အသားထည့်သုပ်မှာလို့ပြောမှ ထပ်မခိုင်းတော့တာ။ မုန့်ဟင်းခါးကိုတော့ တော်တော်လေး သဘောကျတယ်ထင်တယ် ဟင်းရည်နဲ့မုန့်ဖတ်ကို သူစိတ်ကြိုက်ပြင်စားခိုင်းလိုက်တာ ခေါင်းကိုမဖော်ဘူး။ ကိုယ့်အတွက်ကတော့ ကုသိုလ်ရတာပေါ့လေ။
နောက်မှ တခြားဟင်းလေးတွေ ထပ်တင်ပါအုံးမယ်ဗျာ။ အားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာပြီး ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဘေးမှ အမြန်ဆုံးကင်းဝေးကြပါစေလို့ ရွှေညာသားက မေတ္တာပို့သပါတယ်။
၁၃၈၂ ခုနှစ် သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၃) ရက်
စာရေးသူ ရွှေညာသား at Tuesday, November 03, 20200comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
အစားအစာ (138) အက္ေဆး (93) ဓာတ္ပံု (40) အညာအစားအစာ (23) သီခ်င္း (20) ဗဟုသုတ (7) အညာမွာေပါက္တဲ့အပင္ (7) ပန္းပြင့္ေလးမ်ား (6) အညာမွာေပါက္တဲ႔အပင္ (6) မွတ္သားစရာ (3) သိမွတ္စရာ (3) အသီးအရြက္ (2) မိတ္ဆက္ (1) အညာဓေလ့ အသံုးအေဆာင္ (1)
ထိုင္း မိႈဟင္းခ်ဳိ နဲ႔ ေျပာင္းဖူးေထာင္း
My Grandmother, Khin Myo Chit and her short story, 'The Four Puppets'